Manao ny tsy rariny ve Andriamanitra ? (Dieu est-il injuste ?)
Matetika no andrenesana izao fanontaniana izao, izay tsy inona ihany fa fialan-tsiny mahonena noho ny tsy finoana na ny tsy fahalalana: raha marina tokoa fa Andriamanitra dia fitiavana, araka ny lazain’ny Baiboly (1 Jaona 4:8,16), nahoana no tsy arovany kokoa ireo olona nohariany amin’ny kapoky ny fiainana? Ohatra, nahoana no avelany hisy ny fampijaliana ankizy tsy manan-tsiny, ny tsindry hazo lena sy herisetra izay mamely olona maro dia maro eran’izao tontolo izao, ny fahantrana mahamenatra any amin’ny tany sasany sy ny fandanindaniam-poana tsy misy henatra any an-kafa?
Mampahatsiahy antsika ny Romana 8:20-22 fa ny fijaliana mianjady amin’ny voary manontolo dia avy amin’ny avonavona, ny faharatsiana sy ny fitiavan-tenan’ny zanak’olombelona manapaka azy. Ny fandotoana sy ny famonoana ny zava-boary, izay kianina hatraiza hatraiza ankehitriny, dia manamafy izany. Ny fahaverezan-dàlan’ny olombelona, ny fahatsapany ny vokatr’izany ho azy sy ny manodidina azy, dia tokony hanosika azy hianatra handini-tena, hahatsapa ny toerana feno ota misy azy: izay no làlana hahatongavany amin’ny fibebahana sy ny finoana.
Fa mbola tsy voavaly tanteraka ny fanontanianao. Be ireo voina no tsy vokatry ny ota mivantana ary mahatratra ny tompon’andraikitra sy ny tsy tompon’andraikitra, tsy an-kanavaka. I Jesoa mihitsy no efa niresaka an’izany, raha nisy zava-nitranga iray: “...ary ireny valo ambin’ny folo ireny, izay nianjeran’ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny? Tsia, hoy Izaho aminareo; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra.” (Lioka 13:1-5)
Izao no hevitra notsoahin’ny Tompo tamin’izany: ny loza manjo ny sasany dia fampitandremana ho an’ny hafa rehetra. Ao amin’ny vatan’olombelona, ny fanaintainana dia fambara loza: afaka mamonjy ny ain’ny marary izany satria manery azy hanatona mpitsabo, izay hitsabo, tsy ny fanaintanana ihany, fa ny fototra niaviany koa. Ny loza iray hitako, ny fahafatesana tampoka reko, dia mampahatsiahy ahy fa rahampitso koa angamba ny anjarako, ka tsy maintsy vonona aho, fa mety ho foana tanteraka ny zavatra nokasaiko ary mety ho tapaka ny fifandraisana mamy indrindra. “Miomàna hihaona amin’Andriamanitrao” (Amosa 4:12).
“Fa fahafatesana no tambin’ny ota; ary FIAINANA MANDRAKIZAY no FANOMEZAM-PAHASOAVANA avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesoa Tompontsika” (Romana 6:23).